UPDATE: Mashruuc ay saxiixday Dowladda Soomaaliya oo durba ka billowday deegaannada Somaliland, waa magaaladee? | HalQaran.com
Hargeysa (Halqaran.com) – Wasiirka Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Somaliland Cabdillaahi Abokor Cismaan, ayaa markii u horeysay shaaca ka qaaday in deegaanadeeda laga wado Mashruuc ay soo saxeexday dowlada federaalka.
Wasiir Cabdilaahi Abokor oo arrintaasi ka hadlayana wuxuu yiri ”Mashruuca waxa Maalgelinaya Baanka Horumarinta Afrika, Mashruuca Hal-abuurkiisana waxa lahayd Dawladda Somaliland, waxaanu markii uu Madaxweynuhu Jabuuti tagay uu ka codsaday Madaxweynaha Jabuuti in Waddadaa (Boorama iyo Lowyacado) wax lagala qabto”.
Wuxuu kaloo yiri, ”Madaxweynaha Jabuuti wuu ka hawl-galay waxaanu Baanka Horumarinta Afrika ka codsaday in Waddadaa loo dhiso, waxa ka wada codsaday Dawladaha Jabuuti iyo Itoobiya, Dawladda Soomaaliyana markii dambe qayb ka noqotay, maaddaama oo aanay Somaliland ka mid ahayn Wasiirrada Maaliyadda Afrika ee saxeexa Mashaariicda”.
Sido kale, wuxuu hadalkiisa sii raacayay, ”Innaga Soomaaliya waxay inoola mid tahay Itoobiya ama Jabuuti oo kale, Mashruucaana waxa wada saxeexay Saddexdaa Dal, maaddaama oo aynaan innagu ka mid ahayn Baanka Horumarinta Afrika”.
”Mashruucaa shaqadiisana Somaliland baa gacanta ku haysa, laakiin Itoobiya, Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa wada saxeexay Mashruucaa, maaddaama oo ay qayb ka yihiin baanka Horumarinta Afrika”.
Cabdillaahi Abokor Cismaan
Horumarinta Jidadka Somaliland